चुॅदी खोला - विकिपिडिया
चुंदी नेपालको तनहुँ जिल्लाको पश्चिमी भागमा अवस्थित एउटा सानो नदी हो। यो भानु नगरपालिकामा रहेको चन्द्रावती क्षेत्रको वरिपरिबाट सुरू हुन्छ। धेरै सहायक नदीहरू द्वारा सम्मिलित, यो लगभग 18 कि.मि. जति दक्षिण तर्फ बग्दछ र मर्स्याङ्दी नदीमा गएर मिल्दछ। ई.सं.2015मा एउटै भानु नगरपालिका हुनुअघि सम्म यो खोला भानु गाविस र बरभन्ज्याङ गाविस बीचको सिमानाका रूपमा रहेको थियो। हाल यसले भानु नगरपालिका वडा नं पाॅच र चार बिचको सीमानाको काम गरेको छ।
१ सामाजिक आर्थिक पक्ष
३ चुॅदीखोलाका सहायक नदीहरु
४ चुॅदीखोलामा मा पुलहरू
सामाजिक आर्थिक पक्ष[सम्पादन गर्ने]
पुरातन कालदेखि नै यस नदीले चुंडी फाॅटका क्षेत्रहरूमा सिँचाइको स्रोतको रूपमा काम गरेको छ। 150 वर्ष भन्दा लामो इतिहासको साथ चर्चित 'बराह कुलो'ले चुॅदी नदीको पानीलाई 'बराह बाॅधबाट चुॅदीफाॅटका खेतहरुसम्म पुर्याउॅछ। बरह बन्द अवस्थित छ (कहाँ छ? ) केहि मछुवारा सहित धेरै व्यक्ति नदीमा माछा मार्ने गर्दछन्। कोहीले यसलाई बजारमा बेच्छन् जबकि अन्य आफ्नै लागि मार्दछन्। यस नदीले स्थानीय सभ्यताको लागि नुहाउने, लुगा धुने र अन्य धेरै प्रयोजनमा सहयोग गरेको छ। आजकल बढ्दो जनसंख्या घनत्वका कारण यस नदीको तल्लो भागमा थोरै प्रदूषित भएको भए पनि यसले क्रिस्टल सफा ताजा पानीको मर्यादा राख्छ र धेरै जनसंख्या भएको शहरी क्षेत्रका धेरै मानिसहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको छ।
मानसूनको समयमा (जुन - अगस्ट/ अषाढ श्रावन) नदी सामान्यतया भन्दा धेरै ठूलो आकारको हुन्छ र कहिले त 15 गुणासम्म ठूलो भएर बग्छ। यसैले वरपरका जग्गामा बाढी आउँछ। यसले गर्दा नजिकको खेती योग्य खेतहरू काट्छ र धोइन्छ। बरभन्ज्याङ र भानु गाविसलाई जोडेको 'चुंडी ब्रिज सेपाबागीचा' लाई सन् 1998 ताकाको ठूलो बाढीले ध्वस्त पारेको थियो। त्यस पछि अठारवर्ष सम्म यहाँ कुनै ठूलो पुल निर्माण गरिएको थिएन। (सरकारले 2016 मा 'चुंडी खोला ब्रिज सेपबगिचा' को डिजाईन पूरा भएको खबर गरेको थियो र सोही वर्षको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। यो भर्खरै ई.सं. 2018 मा सम्पन्न भयो। ) 
दुर्घटनाहरू: नदीमा डुब्ने र मृत्युको दुई देखि तीन (औसतमा) घटनाहरू प्रति वर्ष देखा पर्दछ। पीडितहरू सामान्यतया साना बच्चाहरू हुन् जो नदीमा खेलिरहेका छन् वा पौडी खेल्छन्।
नेपालका प्रथम कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको तनहुँ जिल्लाको रम्घामा जन्म भएको थियो। रम्घा नाम प्राय: चुॅदीसँग मिल्दछ त्यसैले यसलाई " चुॅदीरम्घा " हुन्छ। चुंडी नदी रामघाको तल्लो तहको जमिनहरूमा बग्छ, जबकि उच्च भूमि रामघा त्यहाँ चुन्डी माथि हाँस्दै। कवि भानु चुंडी र राम्घा वरिपरि बढेको थियो। धेरै किताबहरूमा उनको जन्मस्थान "Chundi रामघा" भनेर उल्लेख छ।
चुॅदीखोलाका सहायक नदीहरु[सम्पादन गर्ने]
लादी खोला र हांडी खोला स्याउलीको नजिक चुंदीमा मिल्दछ। सिस्नेरी र बगुवा खोला चुॅदीमा सेपाबगैचा नजिकै मिल्छ। गरम खोला बारीफान्टमा चुॅदीसँग मिल्छ। चुॅदी नदी बिमलनगरमा पुगी मर्स्याङ्दी नदीमा मिल्छ। (अपूर्ण)
चुॅदीखोलामा मा पुलहरू[सम्पादन गर्ने]
१. चुॅदीखोला पुल डुम्रे
२. चॅदीखोला पुल बांगेरह
3. चुॅदीखोला पुल सेपाबगैंचा (25 मीटर)
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चुॅदी_खोला&oldid=900995" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०८:०४, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।